Tag: waa maxay infographic | Martech Zone
Tag: waa maxay infographic
Infographics-ka ayaa soo jiray in muddo ah laakiin dhawaanahan waxay noqdeen xanaaq oo dhan. Iyada oo bogagga sida Digg dhimanayaan, suuqleyda doonaya in ay fatahaad ka helaan taraafikada boggooda waxay ku darayaan sawiro macluumaad ah oo sheeko weyn leh. Dhowr kun oo doolar, waxaad kireysan kartaa shirkad infographic ah si aad u soo saartid muuqaal xallin sare oo macluumaad ah oo muuqaal ahaan u sharraxaya dhibaatada. Shirkadda Infographic ayaa sameyn doonta cilmi baarista iyo qaabeynta. Qaar
Aaway badhankii ku xigay?
Khamiista, Febraayo 21, 2008 Axad, Febraayo 28, 2016 Douglas Karr
Isticmaalku waa cilmi, laakiin qaar ka mid ah waa dabiici. Waxaan xasuustaa in aan dad badan kala dooday dadka ku saabsan adeegsiga markii aan ka shaqeynayay Maareeye Badeecadeed. Waxaa jira waxyaabo la siinayo - sida sida indhaha ay ula socdaan shaashadda (bidix ilaa midig), sida ay hoos ugu socdaan, iyo sida ay filayaan in wax looga qabto dhinaca midig ee hoose. Saynis badan kuma lug laha, waxyaalahaas qaarkood waa labadaba dareen, iyo qaar ka mid ah